နောက်ဆုံးပေါ် iphone13 ကို ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ ကျောက်ကပ်တစ်ခြမ်းကို ထုတ်ရောင်းခဲ့ပြီးတဲ့ ၁၉နှစ်အရွယ်ကောင်လေးရဲ့ဖြစ် – BaHuTuTa
နောက်ဆုံးပေါ် iphone13 ကို ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ ကျောက်ကပ်တစ်ခြမ်းကို ထုတ်ရောင်းခဲ့ပြီးတဲ့ ၁၉နှစ်အရွယ်ကောင်လေးရဲ့ဖြစ်
September 28, 2021 admin People, Story 0
ဒီနေ့ခတ်မှာ ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရရော ခေတ်ရေစီးကြောင်းနောက်လိုက်ရင်း နောက်ဆုံးပေါ် ဇိမ်ခံ ပစ္စည်းတွေနောက် လိုက်နေကြရတာ ထုံးစံလိုပင်ဖြစ်နေပါပြီ။ အထူးသဖြင့် အသက်ငယ်ရွယ်သူ လူငယ်အများစုက တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းများကို ပိုမိုမက်မောတတ်ကြပြီး အခြားအသုံးပြုသူများကို မျက်ခြေပြတ်မခံပဲ အားကျနေတတ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်မှ appleကုမ္ပဏီဟာ iphone seriesထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သော နောက်ဆုံးပေါ် 13 series လေးမျိုးကို မိတ်ဆက်လာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရှိ အသက်၁၉နှစ်အရွယ်သာရှိသေးသည့် Wang Gangဆိုသည့် လူငယ်လေးသည်လည်း နောက်ဆုံးပေါ် iphone13လေးကို အလွန်ပင် ဝယ်ယူချင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပမေယ့် ဝယ်ယူရန်ငွေကြေးမရှိသည့်အတွက် ကျောက်ကပ်တစ်ခြမ်းကို ယွမ်၂၂၀၀၀ တန်ကြေးနဲ့ ထုတ်ရောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ကျောက်ကပ်ထုတ်ရောင်းထားတာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာများလည်း ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်အပေါ် မှတ်ချက်ကတော့ အဆိုးအကောင်း အများကြီး အမြင်ကွဲလွဲခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့လည်း ကိုယ့်လိုအင်အတွက် ပေးဆပ်ရတာတန်တယ် တချို့လည်း မိုက်ရူးရဲဆန်တယ် စသဖြင့် အမြင်ကွဲပြားကြပါတယ်။ စာဖတ် မိတ်ဆွေများရဲ့ အမြင်ကရော ဘယ်လိုလဲ ? ခေတ်စနစ်ရဲ့နောက် အမှီလိုက်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါသလား?
သခင်ရဲ့အသုဘကိုလိုက်ပို့ပေးရင်း ဝမ်းနည်းစွာငိုကြွေးနေတဲ့ သနားစဖွယ် မြင်းကြီး(ရုပ်သံ)
ဆောက်လုပ်ရေးသုံး သံဖြတ်စက် အသုံးပြုပြီး ဆံပင်ညှပ်ပေးသော ဆံသဆရာ နာမည်ကြီးနေ (ရုပ်သံ)